စိတ်ချရသော၊ ကြိုးစားအားထုတ်သောဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းသည်သင်၏နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်သည် - Breeds
သင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုအနိုင်ရဖို့သေချာတဲ့ဒီရှားပါးမျိုးပွားကိုတင်ပြခြင်း - Dutch Shepherd!
ဒါ့အပြင်ဒတ်ခ်ျလူမျိုးများလို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ဒီခွေးတွေကိုငယ်ငယ်ကတည်းကအလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ သူတို့၏စရိုက်များကိုလေ့ကျင့်ခံရခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည် ခွေးထိန်းကောင် နှင့် အစောပိုင်းစစ်သား ။
ဤရွေ့ကားခိုင်ခံ့ခွေးတစ်ကောင်တစ်ရှိသည် ဉာဏ်ရည်နှင့်လုံ့လအဆင့်မြင့် ။ သူတို့ကအချို့သောလက်တဆုပ်စာဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်, သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူသူတို့ကျိန်းသေသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဂုဏ်ယူစေပါလိမ့်မယ်။
Dutch Shepherds ဆိုတာဘာလဲ
Dutch Shepherd ခွေးဘယ်လောက်ကျလဲ။
ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းများသည်ခွေးများဖြစ်ကြသည် နယ်သာလန် ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်အတွက်လယ်သမားများကိုကူညီသောစွယ်စုံဖောက်, အဂျက် -of All- ကုန်သွယ်ပါပဲ။
ဤခွေးတစ်ကောင်သည်သိုးများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ နွားမွေးမြူခြင်းနွားများ၊ ကြက်များကိုကောက်ပဲသီးနှံများမှမောင်းထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လေးလံသောဝန်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သောလယ်ယာအိမ်မှုကိစ္စများကိုကူညီရန်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။
ဒတ်ခ်ျများလည်းသက်သေပြခဲ့ကြသည် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကင်းလှည့်ခွေး ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူစိမ်းများကိုသတိပေးခြင်း။
လယ်သမားများကဒီဖောက်ကိုရှာ လေ့ကျင့်ရန်လေပြေ ။ ဤရွေ့ကားအလုပ်နှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ချစ်သောအသိဉာဏ်ခွေးဖြစ်ကြ၏။
ဒီမျိုးရိုးကဘယ်ကလဲဆိုတာအတိအကျမသိဘူးဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူး အလုပ်လုပ်ခွေး နယ်သာလန်အဖြစ်ယနေ့လူသိများဒေသ၏ကျေးလက်ဒေသများတွင်။
ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းအတွက်ပထမအဆင့်စံနှုန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် 1898 ။
ဒီဖောက်လုနီးပါးသွားလေ၏ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမျိုးသုဉ်းခြင်း , နယ်သာလန်မှာခွေးမွေးမြူရေးကိုရပ်တန့်ထား။
တစ် ဦး ကဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းရဲ့မျက်စိဖြစ်ကြသည် ဗာတံသီးနှင့်မှောင်မိုက် ။ ၎င်း၏ ဦး ခေါင်းသည်သဘာဝအားဖြင့်သပ်ပုံဖြစ်ပြီးနားရွက်များသည်မတ်တပ်ရပ်နေသည်။
ဒီအပေါက်ရောက်ရှိ, အလတ်စားမှကြီးမားသောအရွယ်အစားမှကြီးထွားနိုင်ပါတယ် 21 မှ 24 လက်မ (54 မှ 62 စင်တီမီတာ) အမြင့်နှင့် 42 မှ 75 ပေါင် အလေးချိန် (19 မှ 34 ကီလိုဂရမ်) ။ အမြိုးသမီးမြားအထီးထက်သေးငယ်လေ့ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Dutchie ရဲ့တည်ဆောက်သည်၎င်း၏ဝမ်းကွဲ၏သူတို့အားဆင်တူသည် ဂျာမန်သိုးထိန်း နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံသိုးထိန်း။
၄ င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်များသည်ခွန်အားရှိပြီးကြွက်သား၊ အချိုးကျမျှတစွာရှိပြီးနေ့စဉ်အလုပ်အတွက်သင့်တော်သည်။ ဤအမျိုးကွဲများအကြားတစ်ခုတည်းသောသိသာခြားနားချက်ဟာသူတို့ရဲ့အင်္ကျီအရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏အင်္ကျီသည်ဆင်တူသောသားပေါက်များ၏သားမွေးများနှင့်များစွာကွာခြားသည် - စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောဂုဏ်ထူးဖြစ်သည်။
Dutchie ၏ကုတ်အင်္ကျီ၏ခြေရင်းသည်များသောအားဖြင့်မီးခိုးရောင်၊ ငွေရောင်သို့မဟုတ်ရွှေရောင်ဖြစ်သည် အဆိုပါအရောင်ပုံစံကိုအမြဲ brindle ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းသည်အပြာရောင် brindle အရောင်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရလိမ့်မည် dilution ဗီဇ ။
ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းရဲ့ brindle ကုတ်အင်္ကျီ
ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်း၏ brindle ကုတ်အင်္ကျီသည် ၁၉၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ဖောက်ခွဲမှုစံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံစံသည်ဤသိုးထိန်းကို GSD နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံသိုးထိန်းများကဲ့သို့သောမျိုးဆက်များနှင့်ခွဲခြားသည်။
ဒတ်ခ်ျတို့၏အင်္ကျီများသည်အရှည်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကွဲပြားသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဖြစ်လိမ့်မည် ဆံပင်တို အခြားသူများရှိနေစဉ်ခိုင်မာသော, အနီးကပ် - သင့်လျော်သောအင်္ကျီနှင့်သိသိသာသာ feathery အမြီးနှင့်အတူ ရှည်လျားသောအင်္ကျီ , ဖြောင့်ကြမ်းတမ်းသားမွေးနှင့်အတူ။
အတော်များများကဒတ်ခ်ျလည်းအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ် ဝါယာကြိုးဆံပင် , wooly အင်္ကျီနှင့်အတူ tousled နှင့်ကောက်ကောက်ပုံရသည်သားမွေးအတူ။
အခြားနွားမွေးမြူရေးခွေးများထဲတွင်ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းလည်းပါဝင်သည် အများဆုံးအသိဉာဏ်တစ်ခု ရှိသည်။ သူတို့ကသူတို့အားပေးပြီးမှပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အမိန့်ဆုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။
Dutchie ပိုင်ဆိုင်သူမည်သူမဆိုသူတို့ကိုလေ့ကျင့်ရန်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုသဘောတူလိမ့်မည်။ သူတို့ဖြစ်နိုင်တယ် အဖြစ်အစောပိုင်း puppyhood အဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြား အလွန်ကောင်းသောအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာသင်ယူခြင်းအလေ့အထများရှိသည်ဟုလူသိများကြသည်။
အချင်းသူငယ်၊ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးများသည်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားသောနွားများနှင့်အတူအလောင်းများနှင့်သိုးနွားများကိုလိုက်ပြေးခြင်းနှင့်ကြက်၊ ပိုးမွှားများသို့မဟုတ်သူစိမ်းများကိုမောင်းထုတ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
သူတို့၏အလောင်းများကိုပြေးရန်၊ ခုန်ရန်နှင့်တောင်တက်ရန်တည်ဆောက်သည်၊ ထိုကြောင့်သူတို့သည်အိမ်ပြင်တွင်ရှိသူများအဖို့စုံလင်သည်။
ဤရွေ့ကားခွေးလွတ်လပ်သောဖြစ်ကြသည်, ထိုသူတို့ဖြစ်နိုင်သည်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်အဘယ်ကြောင့် ခေါင်းမာခြင်းနှင့်ခေါငျးမာ ။
ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုရှိသောမျိုးနွယ်တစ်ခုသည်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သူနှင့်သူနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်ကိုသိသောသူရှိသင့်သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက alpha ။
မျိုးကွဲအမျိုးမျိုးတွင်ကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ Dutch Dutch Shepherd သည်ဂရုစိုက်ရန်အချိန်နှင့်အနည်းငယ် ပို၍ လိုအပ်ပေမည်။
သင်၏ Dutch Shepherd ကိုပြင်ဆင်ခြင်း
ဝါယာကြိုးဆံပင် Dutch Shepherd ( အရင်းအမြစ် )
ဤသိုးထိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြီးလိမ်းပုံသည်သူတို့၏အင်္ကျီအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဆံပင်တိုသောဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းများအတွက် အခါအားလျော်စွာနို့တိုက်ခြင်း လုံလောက်သင့်တယ်
နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေရာသီ: သင်က၎င်း၏မိုးသည်းထန်စွာသွန်းကာလအတွင်းသင့်ခွေးရဲ့ကုတ်အင်္ကျီကိုပိုမိုမကြာခဏတိုက်နိုင်ပါတယ်။
ရှည်သောဆံပင်များရှိသောဒတ်ခ်ျလူမျိုးများကိုအရောင်တင်ရန်လိုအပ်သည် အပတ်စဉ် ။ ဝါယာကြိုးဆံပင်မျိုးများကိုအခြားတစ်ဖက်မှဖယ်ရှားပစ်ရမည် အနည်းဆုံးတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် ။
ရေချိုးသည် ဤရွေ့ကားတက်ကြွခွေးတစ်ကောင်, အထူးသဖြင့်ရာသီဥတုပူနှင့်စိုစွတ်သောလျှင်အထူးသဖြင့်လျှင်။
အခြားခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ပင်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ Dutchie ၏သွားနှင့်နားများကိုလည်းသေချာအောင်သန့်ရှင်းပါ။
သူ၏လက်သည်းများကိုချုံ့ပါ ပုံမှန်သူနာကျင်မှုမရှိဘဲပတ်ပတ်လည်ပြေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်တက်ကြွသောမျိုးပွားများအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။
Dutch Shepherd ကိုဘာကျွေးရမလဲ
ဤစွမ်းအင်မြင့်သောမျိုးစိတ်သည်အထူးသဖြင့်အာဟာရလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အစားအစာတစ်ခုလိုအပ်သည် ပရိုတိန်း , အဆီ နှင့် ဘိုဟိုက်ဒရိတ် ။
အရည်အသွေးမြင့် kibble သင်၏သိုးထိန်းသည်အကောင်းဆုံးအာဟာရရရှိရန်သေချာစေသည်။ သူတို့ကိုအမဲသားများသောခွေးအစားအစာများပေးခြင်းကိုအလွန်အကြံပြုပါသည်။
သင်သည်သင်၏ Dutchie အစာကျွေးနိုင်ပါတယ် နေ့စဉ်ပရီမီယံခွေးအစားအစာ ၂ ခွက်မှ ၃ ခွက်ခန့် ,2အစားအစာများသို့ခွဲခြား။
သင်၏ခွေးအတွက်နေ့စဉ်အကြံပြုထားသောကယ်လိုရီပမာဏသည်သူ၏အမြင့်နှင့်အလေးချိန်ပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် သင်၏ VET နှင့်တိုင်ပင်ပါ သင်၏သိုးထိန်းသည်သူ၏အရွယ်အစားအတွက်လိုအပ်သောကယ်လိုရီအားလုံးကိုရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
သင့်ခွေးအားစတိုးဆိုင်၌သင်တွေ့ရသော kibble ၏အိတ်ကိုသာမပေးပါနှင့်။ သင်၏ kibble ရွေးချယ်မှုသည်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ TO သို့ အမေရိကန်အစာထိန်းချုပ်ရေးအရာရှိများ၏ ssociation (AAFCO) ။ AAFCO သည်ခွေးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက်အာဟာရဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းများကိုသတ်မှတ်သည်။
Dutch Shepherd ခွေးကလေးများသည်ခွေးများကိုခွေးများလေ့ကျင့်ရာတွင်အတွေ့အကြုံနည်းသောပိုင်ရှင်များအတွက်လက်တဆုပ်စာဖြစ်နိုင်သည်။
ဤရွေ့ကားခွေးတစ်ကောင်ကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ရှိသည်ဖို့လေ့နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် ခေါင်းမာသည် စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားမဟုတ်လျှင်။ နာခံမှုသင်တန်း အထူးသဖြင့်ခွေးပေါက်စအဆင့်တွင်ဤဖောက်ခွဲမှုအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
တစ် ဦး အဖြစ်သင့်အခန်းကဏ္ishingကိုထူထောင် alpha သင်သည် Dutchie ၏တင့်တယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှသင့်လျော်သောအပြုအမူများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏ခွေးကြီးပြင်းသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ကြိုးစားနိုင်သည် သွက်လက်လေ့ကျင့်ရေး သူတို့ကိုအလုပ်ရှုပ်စေပြီးသူတို့လိုအပ်သည့်ကာယနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်ရေး၌ဤ Dutchie pup ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သွက်လက်မှုကိုကြည့်ပါ။
ဤသည်ထွက်ရှိအဲဒီမှာအသိဉာဏ်အများဆုံးဝတ်ရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်တင့်သောလေ့ကျင့်မှုနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကြောင့်သင်၏ pup သည်သင်အမြဲအားကိုးနိုင်သောနာခံမှုရှိသော၊ ဖော်ရွေသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ဒတ်ခ်ျလူမျိုးများသည်တစ်နေ့တာလုံးသေတ္တာထဲ၌သာနေရန်လုံ့လရှိကြသည် သေတ္တာလေ့ကျင့်ရေး သင်၏ခွေးကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စေရန်နှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
Crating အတွက်နေရာလေးကိုအတွက်လာလိမ့်မယ် အိမ်လေ့ကျင့်ရေး သင့်ခွေးသည်သူအိပ်နေသောနေရာတစ်ခုကိုမြေကြီးထဲမသွင်းလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏သိုးထိန်းကိုလေ့ကျင့်ရန်သင်လည်းသေတ္တာတစ်လုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့မှသာသူသည်သေးငယ်သောနေရာများအတွင်း၌သူမစိုးရိမ်ပါ။ ဒါကသင့်ရဲ့ခွေးကိုမှန်ကန်စေသည် ကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူ , ကားထဲတွင်သို့မဟုတ် VET ရဲ့ရုံးမှာရှိမရှိ။
အရွယ်ရောက်ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းများသည်မသုံးသင့်ပါ ၈ နာရီကျော် တစ်သေတ္တာထဲမှာ။ သင့်ခွေးကိုပြေးဝင်ရန်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နေရာလွတ်များပေးခြင်းသည်အမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ငြီးငွေ့ဖွယ်မကောင်းသောအပြုအမူကိုအသုံးမပြုတော့ပါ။
Dutch Shepherd တွင်စွမ်းအင်မြင့်မားပြီးပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဖြုန်းဖို့မျှော်လင့်ထား နေ့စဉ်အနည်းဆုံးတစ်နာရီ သင့်ရဲ့ Dutchie ကလိုအပ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပေးခြင်း။
ဒီခွေးမှာခွန်အားရှိပြီးခွန်အားလည်းရှိတယ် လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ပြေး အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းပတ်ပတ်လည်။ တစ်နာရီ ခွေးပန်းခြံ ဒါ့အပြင်သူက off-leash လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုံလောက်သောငွေပမာဏကိုပေးနိုင်ပါသည်။
ဤတွင်သတင်းကောင်းအချို့ရှိသည် - ဒတ်ခ်ျလူမျိုးများသည်ဆော့ခြင်းနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ရရှိနိုင်သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာခွေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဂရုစိုက်မှုဖြင့်သူတို့သည်ပျမ်းမျှသက်တမ်းနှင့်အတူသူတို့သည်သင်နှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေရလိမ့်မည် 11 မှ 14 နှစ်ပေါင်း ။
ဤအခြေအနေသည်အများအားဖြင့်အလတ်စားမှကြီးမားသောခွေးအမျိုးအစားများကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ dysplasia တင်ပါးဆုံရိုး တင်ပါးဆုံရိုးအဆစ်အမြစ်မဖွံ့ဖြိုးလာသောအခါအခြားကျန်းမာရေးပြissuesနာများအကြား, အဆစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့, တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဝါယာကြိုးဆံပင်ရှိသောဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းများတွင် ပို၍ များသောအချက်မှာဤအခြေအနေသည်မျက်စိအရည်များစီးဆင်းမှုမရှိသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအခြားမွေးရာပါရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည် ထာဝရမျက်စိကန်းခြင်း ။
ဤတွင်ပိုမိုသိရှိရန်ထိုက်တန်သောအချို့သော Dutchie မျိုးကွဲများဖြစ်သည်။
Dutch Shepherd နှင့် Husky ရောနှောပါ
Dutch Shepherd နှင့် Husky Mix ( အရင်းအမြစ် )
ဤသည်တက်ကြွသော crossbreed ဖြစ်သွားသည်!
အဆိုပါ Dutchie နှင့် Husky ရောနှောဖြစ်ပါတယ် ယုံကြည်မှုနှင့်အထွက် တိုင်းနည်းနည်းတစ်ခု alpha ခွေး။
ဤသည် crossbreed ၏အစွမ်းသတ္တိနှင့်စွမ်းအင်အဆင့်ကိုအမွေဆက်ခံ ဆိုက်ဘေးရီးယား Husky နှင့်ဤသိုးထိန်း၏အားကစားနှင့်ကြိုးစားကြသောသဘောသဘာဝ။
သို့သော်သတင်းကောင်းမှာဤ hyperactive သည်အလုပ်ကိုလုပ်သကဲ့သို့ playtime ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်ကလေးများအတွက်အလွန်ကောင်းသောမိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ကစားဖော်များပြုလုပ်ကြလိမ့်မည်။
Dutch Shepherd နှင့် Lab ရောနှောခြင်း
ဤအနှစ်ခုဝတ်များ၏ထောက်လှမ်းရေးအငြင်းပွားမရနိုင်ပါ။ ဒတ်ခ်ျ Shepherd နှင့် Labrador Retriever ရောနှောမှုသည်ပျော်စရာကောင်းသောအစဉ်အမြဲရှိနေသောဖော်ရွေသောမိသားစုခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါ။
သိုးထိန်းရဲ့ပင်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူအံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် နာခံခြင်းနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း တစ် ဦး Labrador retriever ။
အဆိုပါ Dutchie ရဲ့ brindle ကုတ်အင်္ကျီကဒီခွေးအပေါ်တစ် ဦး လှပ - ကြည့်ရှုအင်္ကျီကိုဖြစ်စေမည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, Labrador ရဲ့ချစ်စရာကောင်းမျက်နှာကဒီစပ်အပေါ်သိသာပါလိမ့်မည်။
ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းရောစပ်ခြင်း ( အရင်းအမြစ် )
ဒတ်ခ်ျ Shepherd နှင့် Pitbull ရောနှော
American Pit Bull Terrier ၏ပျော်စရာကောင်းသောအရာသည်စည်းကမ်းရှိသည့် Dutchie နှင့်ပေါင်းစပ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပေါင်းစပ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။
မျိုးပွားခြင်းများကဲ့သို့ပင်ဤသိုးထိန်းနှင့် Pitbull ရောနှောပုံကိုအတိအကျဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ဒီပေါင်းစပ်ပုံဘယ်လိုပဲနေပါစေသင်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအသိဉာဏ် ခွေး
Dutch Shepherd နှင့် Australian Shepherd ရောနှောခြင်း
Dutch Shepherd နှင့် Australian Shepherd Mix ( အရင်းအမြစ် )
The Australian Shepherd တစ် ဦး Dutchie နှင့်အတူရောနှောကျိန်းသေကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်ခွေးစေသည်။
သင်တစ် ဦး လယ်ယာပိုင်ဆိုင်ကြဘူးလျှင်, သို့သော်, စိတ်မပူပါနဲ့။ သငျသညျကိုပင်လုပ်ဖို့ Aussie-Dutchie ရောနှောလေ့ကျင့်ပေးနိုင်လိမ့်မည် ရိုးရှင်းသောအိမ်မှုဝေယျာ အိမ်မှာမေးလ်ပို့တာ၊
ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းနှင့် Border Collie ရောနှောခြင်း
သင်၏အိမ်သည် Dutch Shepherd-Border Collie ရောနှောထားသောချစ်ဖွယ်ကောင်းသော၊ စွမ်းအင်မျိုးစပ်သည့်အရာနှင့် ထပ်မံ၍ မဖြစ်တော့ပါ။
ဒတ်ခ်ျနှင့် Border Collie လက်ဝါးကပ်တိုင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သွက်လက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အရူးမြင့်စွမ်းအင်အဆင့်နဲ့ခွေးဖြစ်လိမ့်မည်။
Dutch Shepherd နှင့်ဆက်နွယ်သောနောက်မျိုးစိတ်တစ်ခုမှာဘယ်လ်ဂျီယံမာလီနစ်ဖြစ်သည်။
ခွေးနှစ်ကောင်သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်းဘယ်လ်ဂျီယံ Malinois သည် Dutchie နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဒီနှစ်ခုကတစ်လုံး အားကြီးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည် နီးပါးတူညီသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်အတူ။
ဤသည်သိုးထိန်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ Malinois '' ထက်ပိုထူနှင့်ကြွက်သားဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ခွေးရဲ့ရှားပါးအလားတူ - ရှာဖွေနေဝတ်ရည်ထက်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲ - နှင့်ပိုမိုစျေးကြီး - စေသည်။ ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းခွေးတစ်ကောင်သည်ကုန်ကျနိုင်သည် $ 1000 မှ $ 1200 ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့မျိုးဆက်များမှတစ် ဦး ချင်းစီ။
၎င်းသည်ရှားပါးသောမျိုးပွားဖြစ်နိုင်သော်လည်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းမျိုးဆက်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်ပြproblemနာမဟုတ်ပါ။ ဤခွေးဖြစ်ကြ၏ AKC - အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် သင်ကျန်းမာတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရချင်တယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
Aachen ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းများ (ဥက္ကလာဟိုးမား) - နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အတွင်းဤမျိုးပွားသူသည်အလုပ်နှင့်ခွေးတစ်ကောင်အားကစားအတွက်ကိုက်ညီသည့်အရည်အသွေးမြင့်ခွေးများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့မှာရဲတွေနဲ့စစ်တပ်ခွေးတွေအများကြီးရှိတယ်။
Falconer မှ (California) - ၁၉၇၉ တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောဤသင်တန်းကျောင်းသည်ဂျာမနီ၊ နယ်သာလန်၊ ဒိန်းမတ်နှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံတို့မှခွေးတစ်ကောင်ကိုအထူးပြုသည်။
Car Cher Kennels (မီချီဂန်) - Car Cher Kennels သည်ခွေးများတွင်အကျင့်ဆိုးပြproblemsနာများကိုကာကွယ်ရန်အထူးပြုသည်။ သူတို့၏မီချီဂန်စက်ရုံတွင် Dutch နှင့် Shepherd ခွေးများအပါအ ၀ င်ရဲနှင့်စစ်တပ်ခွေးအမျိုးအစားများရှိသည်။
မွေးစားခြင်းအတွက်ပိုမိုတတ်နိုင်သော option တစ်ခုဖြစ်သည် ခွေးတစ်ကောင်လာပြီ ။ သင်နေထိုင်သည့်ဒေသအပေါ် မူတည်၍ ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းကိုကယ်တင်ခြင်းသည်မည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်ကုန်ကျနိုင်သည် $ 50 မှ $ 500 ။
အရွယ်ရောက်သူ Dutch Shepherd ရလိုလျှင်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အချို့ရှိပါသည်။
Malinois Ranch ကယ်ဆယ်ရေး (Tennessee)
Dutch Shepherd ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်အကြောင်းများစွာရှိသည် ဒီဖောက်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒီခွေးတွေဟာတမင်တကာစွမ်းအားကြီးတယ်၊ လက်တဆုပ်စာဖြစ်သက်သေပြ ခွေးလေ့ကျင့်ရေးအတွက်နောက်ခံအနည်းငယ်သာမရှိသူပိုင်ရှင်များသည်။
ဤသိုးထိန်း၏စွန်ပလွံပင်အင်္ကျီကိုလည်းလိုအပ်သည် ပုံမှန်ဖြီးလိမ်းပုံ ။
ကထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်သော်လည်း ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့်ခွေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် အဲဒီမှာအပြင်က၎င်း၏မိဘများအနေဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇအခြေအနေများမှကျရောက်နေတဲ့ပါပဲ။
သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်မှုဖြင့်ဒတ်ခ်ျသိုးထိန်းသည် ချိုသာပြီးနာခံမှုရှိတဲ့ သငျသညျအစဉ်အမြဲအပေါ်ရေတွက်နိုင်မအလုပ်လုပ်ခွေး။
Micro Pomeranian လမ်းညွှန် - ဖတ်ရမည့်အချက် ၅ ချက်
Chihuahua Terrier ရောစပ်ခြင်း - ၎င်းသည်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရန်နှင့်တူ၏
pitbull နှင့် labrador ခွေးပေါက်လေးများရောစပ်သည်
သေးငယ်သည့် siberian husky သည်အပြည့်အ ၀ ကြီးထွားသည်
half pit bull half lab